ထိုစာအုပ်အဘယ်အရာခေါင်းစဉ်များဆွေးနွေးပါသလား? — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
JTDean • ဇန္နဝါရီလ 27, 2015 တွင် 11:39 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဒါဟာငါရုံထခေါ်နယူးကုမ္ပဏီနှင့်အတူ Employed ခဲ့ကြသည်ဒီတော့ Crazy င်, ဒါကကောင်းစွာဒါလုပ်ပါမဟုတ် ,သို့သော်လည်းငါသည်ထိုလူငယ်နှင့်ဒါဟာခရစ်ယာန်တစ်ဦးသိ Be ရန်စူပါ Cool ရဲ့အဆိုပါအဟောင်းတွေမျိုးဆက်ကျောင်းသားများအားပေးပါလိမ့်မည်သောဤနယူးစာအုပ်ကိုဖတ်ရန် Up ကိုဖွင့်တယ်, သင်က NBA Go ရနိုင်ပါသလား,NFL, MLB. ဘောလုံးကန်သည်, Run ကို Track, အပုဒ်ထုတ်လုပ်ရန်, တစ်မင်းသားဖြစ်လာ, ဒါမှမဟုတ်မင်းသမီး. အဆိုပါက Sky အဆိုပါကန့်သတ် Is, ဘယ်မှာသခင်ဘုရားနေရာရှိသောဝိညာဉ်တော်, ယေရှုခရစ်၏ဧဝံဂေလိအတွက် Liberty နှင့်လွတ်လပ်လည်းမရှိ. ငါကိုသင် Lecrea မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့ ,Tedesi,နှင့် The မှစ. လူတိုင်း 116 ကလစ်နှိပ်ပါ ,ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏အဆိုပါဘုနျးတျောကို Give ,ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏အဆိုပါချီးမွမ်း Give ဤနယူးစာအုပ်ထမြှင့်တင်နိုင်ရန်စောင့်ဆိုင်းလို့မရပါ !!!!!!!သူထိုက် Is ,သူကချီးမွမ်းဘွယ်ဖြစ်ထိုက်ဖြစ်ပါသည်!!!
ဒါဝိဒ်သည် • မတ်လ 29, 2015 တွင် 5:06 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
အဘယ်အရာကိုတစ်ကြောက်မက်ဘွယ်စာအုပ်! Lee ကရေးသားထားသောထားပါတယ်ခရီးစဉ်အားလုံးဆယ်ကျော်သက်များအတွက်စာအုပ်ကိုဖတ်ရမည်ဖြစ်သည်. ငါကချထားနိုင်ဘူး.5ထဲက5ကြယ်များ.
ဒါဝိဒ်သည် • မတ်လ 29, 2015 တွင် 5:18 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ခရီးစဉ်ကို, ငါသည်လည်းသင့်ရဲ့အိပ်ပျော်နေတဲ့ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်. ဆုတောငျးလကျြပါပြီ။;) သငျသညျ သာ. ကောင်းသည်ဟုခံစားရမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်:: D
Yves • မေ 30, 2015 တွင် 2:14 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ခရီးစဉ်ကို, ကျွန်မစာဖတ်သို့ဘယ်တော့မှခဲ့သည်. သို့သော်ဘုရားသခင်ကစာသားငါ၏အအိပ်ပျော်ခြင်းမှငါ့ကိုနှိုးနှင့်သင့်စာအုပ်ဝယ်ဖို့ငါ့ကိုယုံကြည် “တက်”. လူသား, ငါကကိုလက်စသတ်ကြပြီမဟုတ်ပေမယ့်ငါနီးပါးနှင့်အတူဆက်ဆံတာသဘောပေါက် 99.9% သငျသညျထခန့်စကားပြောနေကြသည်ပြဿနာ. ကြောင်းသဘောပေါက်ငါ၏အအနာရောဂါငြိမ်းစရာများနှင့်အပြောင်းအလဲများဆီသို့ဦးတည်ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာအကြီးစာအုပ်သည်လူင်, ငါ့ကိုဟစ်ဟော့ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အတူမေတ္တာ၌ဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူ, ငါဟာ Rapper / သင်းအုပ်ဆရာအားဖွငျ့အကြှနျုပျမှစကားပြောဘို့ထာဝရဘုရား၏ချီးမွမ်းကြ. ငါလုံးဝအဲဒါကိုပြန်ပြောပြနိုင်ပါတယ်…
နှင့်တဦးတည်းကိုပိုပြီးအရာ, ငါသည်သင်တို့ကိုတစ်ရက်ပ်ထက်စာရေးဆရာအဖြစ်ပိုကောင်းသဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့ဒီညျဘုရားသခငျ၏အကြီးပုံပြင်၌ကြီးစွာသောအလုပ်လုပ်နေတာစောင့်ရှောက် :)
မင်းတုံး • ဇွန်လ 4, 2015 တွင် 1:09 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
အကောင်းဆုံး Tha lee ခရီးစဉ်! သင့်ရဲ့အလုပ်ကဒီမှာနိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်ကျော်လေးမွတျ. သင်တစ်ဦးကောင်းကြီးမင်္ဂလာ bro, ကြေးဇူးတငျစကား. @iamslizybolt #rhemaprocess #116
PK • ဇွန်လ 26, 2015 တွင် 3:25 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ခရီးစဉ်ကို, ငါလအနည်းငယ်အကြာသင့်ရဲ့စာအုပ်ဝယ်ခြင်းနှင့်ငါတကယ်သင်မည်မျှမှန်ကန်ကိုချစ်. ငါငါတို့သခင်အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်ရန်သင့်စိတ်အားထက်သန်မှုအရမ်းလေးစားမိပါတယ်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုအသက်ရှင်ဖို့လိုလားလမ်းကိုအသက်ရှင်ဖို့ဆက်လက်ငါ့ကိုလှုံ့ဆျော. ကျွန်မအတော်လေးငါ kinda ကြောင်းရှိသည်စာအုပ်အကြောင်းမရှိအတူပြုတော်မနော်7နာရီလောက်မှာယုတ္တိဗေဒအရမ်းရယ်ရတယ်ယခုအချိန်တွင်သွား! ဒါပေမယ့်ငါတကယ်သင့်ရဲ့စာအုပ်အားဖြင့်မှုတ်သွင်းတယ်. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, အစ်ကို! ဘုရားသခင်သင့်ကိုကောင်းချီးပေးပါစေ!
အလန် • ဇူလိုင်လ 17, 2015 တွင် 11:24 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Chara • သြဂုတ်လ 7, 2015 တွင် 9:33 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါသည်ဤစာအုပ်တွင်ရှိသည်ဖို့ဒါစိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်!! ငါအွန်လိုင်းကအမိန့်ကြောင့်လာရန်အဘို့အကျွန်ုပ်စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ကြ. ငါဒါဒီတစ်ခုမှရေးဆွဲခဲ့သည်အဘယ်ကြောင့်ငါသေချာမသိခဲ့, အထူးသဖြင့်ကျွန်မစာမဖတ်ကြနဲ့တကယ်ကိုမကြာမီဘယ်အချိန်မဆိုဖတ်ရှုဖို့အစီအစဉ်များရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးငါ့စာအုပ်ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းအပေါ်မြောက်မြားစွာနဲ့အခြားစာအုပ်တွေရှိတယ်စဉ်းစား :-) သို့သော်လည်းငါသည်ထအပေါ်စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ကြရတယ်ကြောင့်နောက်ဆုံးတော့မနေ့က လာ. ,. ကျွန်မအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါအဲဒီမှာအထုပ်တံခါးနားမှာကြီးနဲ့ကျွန်မကစာအုပ်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်. စာအုပ် USPS တင်ပို့ခြင်းနှင့်ငါ့စာတိုက်ပုံးထဲမှာခဲ့ပါတယ်ထွက်နှစ်မြောက်မွေးနေ့. တံခါးနားမှာအထုပ်ငါအမိန့်ဖိနပ်တရံခဲ့. ငါတကယ်ဖိနပ်များအတွက်အရာရှိသည်နှင့်ငါလုံးဝသူတို့ကိုငါအမိန့်မေ့သောကွောငျ့ဤအဒါသိသာဖြစ်ပါသည်. ကျွန်မခင်ပွန်းပင်ငါ pair တစုံကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့တယ်မဟုတ်လျှင်ငါသည်ဤအိမျတျော၌ဖိနပ်၏အခြားတစ်စုံဆောင်ကြဉ်းရန်မလိုအပ်ခဲ့ဘူးဆိုပါတယ်. ဒါကငါ့ထံသို့စဉ်းစားအပြစ်အနာဖြစ်ပါတယ် :-) သူနောက်ဆုံးညဉ့်ဖိနပ်တွေအကြောင်းဘာမှမပြောခဲ့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သူသည်ငါ၏ယုတ္တိဗေဒအတူတက်ဖမ်းနေသည်!! ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်, ကလေးတွေအိပ်ရာသို့သှားကွ၏ထိုနောက်ငါထကျအခနျးအားဖြင့်ဖတ်ရှုခြင်းကစတင်2ငါဒါစာအုပ်ရန်ရေးဆွဲခဲ့ဘာလို့ငါသိတယ်. အဆိုပါအကြောင်းပြချက်မှတ်ချက်အပိုင်းများတွင်စာရင်းပြုစုဖို့လည်းမြောက်မြားစွာရှိပါတယ်ဒါပေမယ့်ငါမျြးအခနျးကွီးပျေါတှငျဖွစျပါ၏4ယခုပြုလုပ်ထားပြီးငါ့ထံသို့ volumes ကိုအမိန့်တော်ရှိ၏. အဓိကအားကြောင့်ကျမ်းစာလာသည်ကားလမ်းနှင့်မည်သို့သောအခြားအမှုအရာမှချိတ်ဆက်၏. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်, ကျွန်မစိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်နဲ့ကျွန်မပြီးသားမင်္ဂလာပါပြီ. ယခုတွင်ငါသည်ဖတ်နေဆက်လက်သွားနေပါတယ်ဒါပေမယ့်ငါကဒီမှတ်ချက်ရေးသားဖို့တစ်ချိုးယူ.
ပုဆိန် • ဒီဇင်ဘာလ 15, 2015 တွင် 1:39 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
PST. ခရီးစဉ် u've ငါ့ထံသို့အစစ်အမှန် blessin ခဲ့. ကြိမ်မြောက်ဈတကယ်ဦးကြုံတွေ့ရ makin ငါ့အဘို့ဘုရားသခငျသညျကိုကောငျးကွီးပေး. ဤနေရာတွင် nigeria ၌အကြှနျုပျတို့၏ဒေသခံအသင်းတော်များနေဆဲ c ကိုရက်ပ်အဖြစ်ခရစ်ယာန် vry ဖြစ်ခြင်း NT
RobinRicheson • မတ်လ 25, 2016 တွင် 12:15 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါသည်သင်တို့၏စာအုပ်ဝယ်ဖတ်အဓိပ္ပာယ်ခဲ့ကြပေမယ့်ဘဝအချိန်များတွင်ဒါ hectic ရရှိသွားတဲ့. သို့သော်လည်း hectic နေရခြင်း, ငါ့မိသားစုနှင့်ငါ့ကိုနေ့စဉ်ဘဝတွေကို, ခရစ်တော်သည်အစဉ်အမြဲပထမဦးဆုံးလာ.
ဤတွင် Owensboro ကျွန်တော်တို့ရဲ့မွို့တှငျ, ky. ငါ့အသင်းမှတဆင့်အပြစ်သား၏သူငယ်ချင်းများကိုခေါ် program တစ်ခုလည်းမရှိ. အပြစ်သား၏သူငယ်ချင်းများသမ္မာကျမ်းစာအမှန်တရားတွေမှတဆင့်ခရစ်တော်ထံသို့ယောက်ျားမိန်းမတို့၏ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကိုအာရုံစိုက်နေတဲ့ခရစ်တော်ကိုဗဟိုပြုလူနေအိမ်ပစ္စည်းဥစ္စာပြန်လည်ထူထောင်ရေးအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်, တာဝန်ခံမှု, အသက်ရှင်ခြင်းကျွမ်းကျင်မှု. . .ကျွန်ုပ်တို့သည်ခရစ်တော်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီအစ်ကို, ညီအစ်မခွင့်လွှတ်ရှာအံ့သောငှါကူညီပေးဖို့ကွိုးစားကွ, သူတို့ရဲ့အမှားတွေကနေသင်ယူဖို့, ဘုရားသခင်ကိုသိသူနှင့်အတူတစ်ဆကျဆံရေးတည်ဆောက်ရန်. အဆိုပါဒေသခံများက, န်ထမ်း, နှင့်စေတနာ့ဝန်ထမ်းအားလုံးအံ့သြဖွယ်သောလူမျိုးဖြစ်ကြ၏!
ကျွန်မခင်ပွန်းနဲ့ကျွန်မအတိတ်တွင်အမှားရာ၌ခန့်ထားပြီ; ဘုရားသခင်ကိုမသိသူတို့ထဲကတစျခုဖွစျသညျ. ယနေ့တွင် (3/24) ကျနော်တို့ကျင်းပ 15 ဘုနျးကွီးသောလက်ထပ်ထိမ်းမြား၏နှစ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်၏ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းနှင့်သူ၏မေတ္တာတော်နှင့်ကျေးဇူးတော်မသိဘဲရှိသည်မဟုတ်မယ်လို့. ဒါကနေ့စဉ်ကျွန်ုပ်တို့၏ကလေးများသတိပေးတစ်ခုခုဖြစ်ပါသည်!
ဒါဟာအပြစ်သားရန်ပုံငွေပွဲကျွန်တော်တို့ရဲ့နှစ်ပတ်လည်သူငယ်ချင်းများမှာပုံပန်းသဏ္ဌာန်လုပ်သြဂုတ်လ 20 ရက်နေ့တွင် Owensboro ၌သငျရှိသည်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုတုန်လှုပ်လိမ့်မယ်!
Kianna • မေ 20, 2016 တွင် 4:14 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါသည်ငါ့မိတ္တူများ. ငါသည်ဤရက်သတ္တပတ်၏အဆုံးအားဖြင့်စာအုပ်ပြီးအောင်လုပ်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်. ငါဒါဝေးကိုဖတ်ရှုသောအရာကိုခံစားခဲ့ကြ,
KIANNA • ဇွန်လ 26, 2016 တွင် 1:33 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
CG • အောက်တိုဘာလ 30, 2017 တွင် 10:41 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
သင့်ရဲ့စာအုပ်အံ့သြဖွယ်ဖြစ်ပါသည် trip!! ဒါဟာဘုရားသခင်နှင့်အတူငါ့အလမ်းလျှောက်၌ငါ့ကိုကူညီပေးခဲ့တယ်ငါအဖန်ဖန်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကရည်ညွှန်းရှာတွေ့. ဒါဟာအချို့အကြီးအအခြေခံမူရှိတယ်. အကြှနျုပျ၏အကွိုကျဆုံးအခနျးတှငျဖြစ်ပါသည်4အဘယ်သူမျှမစူပါခရစ်ယာန်တွေဟာ. သင့်ရဲ့စာအုပ်ကောင်းကိုဘဝလည်းကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်!